सप्तरीमा कफ्र्यूको उल्लंघन गर्दै मोर्चाका कार्यकर्ता विहानैदेखि सडकमा, सिरहाको लाहानपनि तनावग्रस्त
7 Mangshir 2072 Monday 4:50 am प्रतिकृया दिनुहोस
तीन दिनदेखि तनाबग्रस्त बनेको सप्तरी अझै सामान्य हुन सकेको छैन । सदरमुकाम राजविराज, भारदह, रुपनी, कञ्चनपुर, बरमझिया, बिसनपुर, कदमाहासहितका ठाउँहरुमा मोर्चा कार्यकर्ताले विहानैदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । राजविराज, भारदह र रुपनीमा स्थानीय प्रशासनले लगाएको कफ्र्यूको अवज्ञा गर्दै मोर्चा कार्यकर्ताहरुले हिजैदेखि थालेको प्रदर्शन आज झन उग्र बनेको छ । आज पनि राजविराजस्थित मिनि मार्केट चौकमा मोर्चा कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भईरहेको छ । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले केही राउण्ड अश्रु ग्यास र हवाई फायर गरेको छ । मोर्चा कार्यकर्ताहरुले केही बेर अघि राजविराजस्थित जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयमा आगजनी गरेका छन् भने कोईलाडी बरसाईनस्थित प्रहरी चौकीमा पनि आगजनी गरेका छन् । सदरमुकाम राजविराजको अदालत रोड, रुपनी मोड, अस्पताल चौक, जनआन्दोलन चौक, गजेन्द्र चौक, तेतरी गाछीमा प्रदर्शन भईरहेको छ । ठाउँमा ठाउँमा मोर्चा कार्यकर्ता र प्रहरीबीच भडप भएको छ । प्रदर्शनकारीले सप्तरीको विभिन्न ठाउँमा दुई वटा मोटरसाईकलमा आगजनी र दर्जन बढी सवारीसाधनमा तोडफोड गरेका छन् । प्रहरी एस्कर्टिङ्गमा रहेका सवारी साधनमाथि आज बिहान सप्तरीको कञ्चनपुरदेखि बरमझियासम्मको क्षेत्रमा तोडफोड गरेको छ । सवारीसाधनमाथि प्रदर्शनकारीले ढुंगा प्रहार गरेपनि सप्तरीको भारदहमा बसका यात्रुहरुले स्थानीय बासिन्दाको आधा दर्जन घरमा तोडफोड गर्दै आगजनीको प्रयास गरेको छ । यात्रुहरुले सर्वसाधारणको घर तोडफोड गरिरहँदा प्रहरी मूकदर्शक बनेको विरोधमा केही बेर अघि भारदहमा बा.६२ प. ४१६२ र को.३ प. ३१ ३६ नम्बरको मोटरसाईकलमा आगजनी गरेको छ । सोही क्रममा प्रहरीले स्थानीय ६० वर्षिय सत्यनारायण मण्डललाई प्रहरीले घर पसेर निर्घात कुटपिट गरेको छ । उनको स्थानीय उपचार केन्द्रमा उपचार भईरहेको छ । यस्तै भारदहमा इलाका प्रहरी कार्यालय रहेको क्षेत्रको डेढसय मिटर आसपासका बासिन्दाहरुलाई घर छाडेर भाग्न उर्दी जारी गरेको स्थानीयहरुले बताएका छन् । यता अस्पताल प्रवेश गरी प्रहरीले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि लाठीचार्ज गरेको विरोधमा आज दोश्रो दिन पनि राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालको सबै सेवा ठप्प रहेको छ । सप्तरीको राजविराज, भारदह र रुपनीमा स्थानीय प्रशासनले लगाएको कफ्र्यू आज पनि यथावतै रहेको छ । आज राजविराजस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय क्षेत्रमा समेत कर्फयू आदेश जारी भएको छ । सप्तरीमा शनिवार र आईतवार गरी प्रहरीको गोलीबाट चार जनाको मृत्यु भईसकेको छ । मृत्यु हुनेहरुमा सप्तरी डाढाका बिरेन्द्र राम, जमुनी मधेपुराका नागेश्वर यादव र शिवशंकर दास तथा राजविराजका दिलीप साहको मृत्यु भएको छ भने तीन दर्जन बढी घाईते भएका छन् । घाईतहरुको धरानस्थित विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भईरहेको छ भने मृतक चारै जनाको शव पनि त्यही पोष्टमार्टमकालागि राखिएको छ ।
उता संयुुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सिरहाको लहानस्थित ईलाका प्रहरी कार्यालय अगाडी राजमार्गमा टायर बाल्न खोजेपछि प्रहरीसँग झडप भएको छ । आन्दोलनकारीले बालेको टायर प्रहरीले हटाउन खोजेपछि झडप भएको हो । झडपका क्रममा प्रहरीले अन्धाधुुन्ध लाठी प्रहार गर्न थालेपछि आधा दर्जन आन्दोलनकारी घाईते भएका छन् । घाईतेहरुको उपचार लहानस्थित विभिन्न अस्पतालमा भईरहेको बताइएको छ । मोर्चाका अनुसार प्रहरीले स्थानीय विशाल होटल अगाडी उभेको अवस्थामा मोर्चाका संयोजक कृष्णबहादुुर यादबलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर बन्दुुकको कुुण्डा र लाठीले गम्भिर घाईते बनाएको बताइएको छ । यसैविच प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन पाँच राउण्ड हवाई फायर समेत गरेका छन् । तरपनि मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले राजमार्गको ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् । राजमार्गमा अहिले नेपाल र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ । बन्दका कारण बजार, बैंक तथा वित्तिय संस्था, उद्योग कलकारखाना पूूर्ण रुपमा ठप्प छ । दुुई दिनयता मोर्चाले आन्दोलन सशक्त पारेपछि जनजीवन सिरहाको नराम्ररी प्रभावित बनेको छ ।
आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले पेट्रोल चेकजाँच गर्ने भन्दै सिमराबाट पथलैया जाँदै गरेको मोटरसाइकलसहित चालकलाई आगो लगाई घाइते बनाएका छन् । १०÷१२ जनाको समूहले बीरगन्ज पथलैया सडकखण्डअन्तर्गत लिपनीमाल–४ मा मोटरसाइकलमा पेट्रोल चेक गरी खन्याउने क्रममा अनटेष्ट लेखिएको मोटरसाइकलमा आगजनी गर्नुका साथै चालकको खुट्टा जलाएर घाइते बनाएका हुन् । घाइते हुनेमा पर्सा खिलिचरी निवासी ४१ वर्षीय ध्रुब साह रहेका छन् । साहको दुईटै खुट्टा र हात जलेको छ भने उनको बीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । घटनाबारे सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा यसकिसिमका संवेदनाहीन काम गर्नेहरु मोर्चाको कार्यकर्ता हुननसक्ने दाबी गरेका छन् ।।।